बुटवलमा प्रभावकारी बन्दै सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, विदेशिन लागेका युवा गाउँमै बने स्वरोजगार – Nepal Press
२०७८ मंसिर २२ गते
#स्थानीय तहलाई परिपत्र
बुटवलमा प्रभावकारी बन्दै सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, विदेशिन लागेका युवा गाउँमै बने स्वरोजगार
उपमहानगरको कृषकका लागि थुप्रै लोभलाग्दा कार्यक्रम
२०७८ कार्तिक ५ गते १३:४४
रुपन्देही । सहरी क्षेत्रमा साना साना जग्गा बाझो राखेर कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको बेला बुटवल उपमहानगरले सञ्चालन गरेको सहरी कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।
किसानलाई अनुदानमा बीउ तथा उपकरण प्रदान, फसल धितो राखेर अनुदान, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान, कौसीमा तरकारी खेती, जैविक मल र महामारीमा आर्थिक प्रोत्साहनसहितका कार्यक्रमसहित सहरी कृषि प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सहरी कृषिमा समर्पित धेरैका लागि आयआर्जनको सारथि बनेको छ । यहाँ किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमै र समूह बनाएर व्यवसायिक कृषि सुरु गरेका छन् । उपमहानगरले विज्ञहरुमार्फत व्यवसायिक कृषि गरिरहेकालाई खेतीप्रणाली र व्यवस्थापनसमेतका काममा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमबाट लाभ लिएका बुटवल–१२ का भूपेन्द्र सारुसहित उनको समूहका चार जना अहिले नमूना व्यवसायिक किसान बनेका छन् । विदेश जाने सोचमा रहेका उनी सहरी कृषिमा आवद्ध भएपछिका दिनमा आम्दानीले प्रफुल्लित छन् । उनीसहित परिवारमासमेत प्रसस्तै काम पुगेको छ र बेरोजगार बन्नु परेको छैन । उनीहरुलाइ जैविक तरकारी उत्पादन कृषक भनेर धेरैले चिन्छन् । उपमहानगरले यस्ता किसानका फसललाई सहकारीमार्फत बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।
उनीहरुको समूहले पूर्णजैविक तरकारी उत्पादन गरेर आफ्नो मात्रै जीवन धानेका छैनन्, बुटवलबासीलाई स्वच्छ तरकारी पनि खुवाएका छन् । सारु भन्छन्, ‘अझै पनि धेरैले हेंला गरेको र चासो नदिएको पेसाको रुपमा छ कृषि तर मेरा लागि भने यो महत्वपूर्ण निर्णय सावित भएको छ । यसमा उपमहानगरपालिकाको सहयोगले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।’
बिउ मात्रै होइन, त्यसपछि उनको समूहलाई उपमहानगरपालिकाले छाप्रा हाल्न, टनेल बनाउन र पशुपालनका लागि घाँस काट्ने मेसिन किन्न, पशुपालनका लागि दाना, नश्ल सुधार, गोठ सुधारसम्मका धेरै काममा अनुदान दिएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा उपमहानगरले अरु थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । खेतबालीसम्मै पुगेर कृषिका बारेमा प्राविधिक ज्ञान, सीप र बाली पात्रोअनुसारको तरिका सिकाउनुका साथै आवश्यक उपकरण दिने र उत्पादित उपजको बजारीकरणमा पनि उपमहानगरले टेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
विपन्नको पहिचान गरेर बाख्रा पालनका लागि बाख्रा वितरण र त्यसका लागि खोर बनाउने रकम समेत उपमहानगरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने सयौंको सारधि बनिरहेको छ, उपमहानगरपालिकाको सहरी कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रम ।
नगरप्रमुखका रुपमा शिवराज सुवेदी र उपप्रमुखका रुपमा गुमादेवी आचार्य चुनिएर आउनुभन्दा अघि बुटवलमा कुनै पनि व्यवसायिक कृषक समूह थिएनन् । तर, अहिले यहाँ धेरैजसो वडामा कृषकका व्यवसायिक समूह बनेका छन् । समूहमा आवद्ध भएकाहरुले व्यवसायिकरुपमा खेती गर्दै आएका छन् । महिलाहरुका समेत अलग्गै समूह दर्ता भएर कृषि कर्मलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छन् ।
कृषि कर्ममा पनि अब्बल बनिरहेका अगुवा महिला मधुकला कुवँर, सावित्रा रेग्मीलगायतले बुटवलको सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले धेरैलाई आकर्षित गरेको बताउँछन् । बुटवल भनेको भिडभाड भएको व्यस्त बजार क्षेत्र मात्रै होइन व्यवस्थित खेतीपाती गर्ने उपयुक्त जमिन भएको क्षेत्र पनि हो भन्ने कुरालाई सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले सावित गरिरहेको महिला अगुवा रेग्मीको भनाइ छ ।
भूपेन्द्र सारुको जस्तो २० वटा व्यवसायिक कृषक समूह उपमहानगरको कृषि नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भइसकेको कृषि शाखाको तथ्यांकमा छ । उपमहानगर बाहेक प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिनेगरी अरु केही समूह पनि बुटवलमा छन् । तीबाहेक बुटवलमा अहिलेसम्म एक सयजना व्यवसायिक कृषक, आठ वटा व्यवसायिक उत्पादक समूह, ५ वटा कृषि सहकारीले उपमहानगरपालिकाकै सहयोगमा व्यवसायिक कृषि अंगाल्दै आएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि मात्रै बुटवलमा १२ वटा सहकारीले जिम्मा पाएका छन् । किसानका घरदैलोमा रहेका वडा कार्यालयहरुबाट नै अनुदानको मल वितरणका लागि उपमहानगरपालिकाले स्वीकृती दिएको छ । जथाभावी रसायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । जैविक खेतीका लागि जैविक मलको उत्पादन गर्न पनि उपमहानगरले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
तीबाहेक बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नेगरी जग्गा भाडामा अनुदान, उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम, व्यवसायिक तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक मौरीपालन, फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि सामुहिक खेती, कृषि औजार उपकरणमा अनुदान, कौसीमा तरकारी खेती कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रमले बुटवलको कृषि क्षेत्र कायापलट भएको छ ।
बुटवलले पाँच स्थानलाई तीन क्लष्टरमा बाँडेर करिब चार सय कठ्ठाको तरकारी पकेट क्षेत्र पनि बनाएको छ । अर्कातर्फ च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत दुईवटा च्याउ उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । यसको अलग्गै समूह निर्माण भएको छ । च्याउका यी समूहले एक सिजनमा मात्रै दुई सय ५० क्विन्टल ताजा च्याउ उत्पादन गरी २७ लाख रुपैयाँको च्याउ बिक्री गर्न सफल भएको अगुवा महिला जमुना सुवेदी पोखरेलले बताइन् ।
रसायनविहीन ताजा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न बुटवलले ८० वटा हरितगृह निर्माण गरेको र जैविक मलमा आकर्षण बढाइएको छ । त्यस्तै बाली धितो राखी सहकारीलाई सहुलियत कृषि ऋण दिने कार्यक्रमअनुसार गत बर्ष बुटवलले धानबालीमा मात्रै चार सय ५० मेट्रिक टन र गहुँबालीमा दुई सय ७५ मेट्रिक टन बाली धितोमा राखेर साना किसानलाई अनुदान दिएको थियो । धान रोप्ने र काट्ने खेतालाका लागि पारिश्रमिक दिनसमेत पैसा नभएका किसानले यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिइराखेका छन् ।
स्थानीयको जनस्तर उकास्नका लागि कृषि विकासलाई नै प्रमुख नीति बनाएको बुटवलले ‘के पाइन्छ होइन के चाहिन्छ’ भन्ने आधारमा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । स्थानीयलाई कृषिबाट विमुख नबनाइ दीगो जीवनस्तर वृद्धिका लागि आधुनिक व्यवसायिक कृषि विकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सहरी कृषि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रमुख सुवेदीले बताए ।
बुटवलमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरु नगर प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहेको स्थानीय कृषि व्यवसाय सञ्चाल समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । बुटवलले अंगिकार गरेको कृषि नीतिले बुटवलमा रहेको तीन हजार नौ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा कृषि उत्पादन गर्दै त्यो जग्गाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।
जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान
बुटवल उपमहानगरले कृषि कर्ममा युवालाई आकर्षित गर्नेगरी जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बुटवलले सञ्चालन गरेको कृषिमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनको यो कार्यक्रमले युवालाई किसानमा आकर्षित गर्ने र व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पुर्याएको छ । अहिले महामारीले कृषि कर्ममा धेरैको आकर्षण बढाइरहेका बेलामा बुटवलले अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै सहरी कृषि प्रर्वद्धनका नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव ०७५/०७६ देखि नै बुटवलका बाँझो जग्गा तथा खेती नगरिएका जग्गाको सदुपयोग गरि कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नौलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिकठ्ठा एक हजार रुपैयाँका दरले भाडामा अनुदान दिने नीति बनाइएको छ ।
बजार क्षेत्रमा कौसी तरकारी खेती
व्यस्त बजार क्षेत्रका घरहरुमा कौसीमै तरकारी तथा साना फलफुलको खेती गर्न मिल्नेगरी बुटवलले तालिम र प्रशिक्षणसमेत दिएको छ । तालिम र प्रशिक्षण लिएकाहरुले घरका छत र कौसीमा नमूना खेती गरिरहेका छन् ।
बजार क्षेत्रका सबै वडामा खाद्य, पोषण तथा कौसीखेती कार्यक्रम सञ्चालित छ । यसका लागि २५ जना श्रोत व्यक्ति तयार पारेर कौसीखेतीमा सहजीकरण गरिएको छ ।
जग्गा नहुनेहरुालाई तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन कौसीखेतीको अवधारणा अगाडि सारिएको बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । कृषि बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका काममा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत मिलेको उनको दाबी छ ।
फसल धितो राखेर सहुलियत ऋण !
बुटवलले सुरु गरेको किसानको फसल धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम मुलुकमै नौलो मानिन्छ । साथै किसानलाई गुणस्तरीय विउसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको धान तथा गहुँको मूल्याकंन गर्दै उनीहरुलाई पायक पर्ने सहकारी मार्फत फसल धितो राखेर ऋण उपलव्ध गराइँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेका खाद्य बाली धान र गहुँको बीउलाई सहकारीले गोदाममा भण्डारण गर्दै किसानलाई आवश्यक ऋण उपलव्ध गराइएको छ ।
बुटवल–१७ मा रहेको सिम्रिक र बुटवल–१६ को आदर्श कृषि सहकारीसंग उपमहानगरले सहकार्य गरेको छ । सहकारीमार्फत धान, धानको बीउ, एक सय मेट्रिक टन गहुँ र गहुँको गुणस्तरीय बीउ भण्डार गरिएको थियो ।
अब नयाँ धान उत्पादन भएपछि त्यहीँ भण्डारण गरिने भएको छ । उत्पादक किसानलाई फसलका आधारमा आवश्यक सहुलीयत दरको ऋण प्रवाह गरिँदै आएको यो कार्यक्रम मुलुकमै पहिलो हो ।
बुटवलले आगामी आर्थिक २०७८/७९ मा ‘के पाइन्छ होइन, के चाहिन्छ’को नीति अवलम्बन गर्दैै कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउने खालका कार्यक्रमहरु बनाएको छ ।
कृषि वस्तुको संकलन, प्रशोधन, संचय र ढुवानी आदि कार्य गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको सहकार्यमा प्रदेश स्तरीय कृषि थोक बजार नगरभित्र स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग तथा सहजिकरण गर्ने उपमहानगरको योजना छ ।
उर्वर कृषि भूमि तथा सावर्जनिक जग्गालाई गैर कृषिको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्दै फलफुल तथा सुहाउँदो बाली क्षेत्र विस्तार गर्दै कृृषिका कुनै न कुनै उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने उपमहानगरको योजना छ । पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशुपंक्षी विकास तथा पशुस्वास्थ्य कार्यक्रम तथा पशुपंक्षी कृषक पहिचान कार्यक्रम जारी रहेको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।
जैविक कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना
उत्पादक, संकलक र वितरक सबै कृषक मात्र रहने गरी बुटवलमा जैबिक कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
बुटवल १५ मा जैविक तरकारी उत्पादन कृषक समूहद्वारा प्रबद्धित रहेको उक्त केन्द्रमा उत्पादक, संकलक र व्यापारी सबै किसान नै रहने छन् । प्रदेश, स्थानीय सरकार, कृषकको लागत सहभागिता हुने गरी यो नमुना योजना अगाडि बढाइएको हो ।
सफ्टवेयरबाट कार्यक्रम संचालन हुने कृषि उपज केन्द्रमा सामान लगेर दिएपछि कृषकको मोवाइलमा म्यासेज जाने र रकम बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । यसको सदस्यता लिन बुटवल क्षेत्रभित्रका न्युनतम ३ सय केजी तरकारी बर्षमा दिनुपर्ने ब्यक्तिगतको हकमा समूहको हकमा भने दश हजार किलो दिने मात्रै सेयर लिन सक्ने प्रावधान छ ।
सामान्यतया स्थानीयस्तरमा उत्पादित तरकारी मसला र फलफुल वालीहरु स्थानीयस्तरमा संकलन गरी उचित वजार व्यवस्थापन गरी साना कृषकलाई प्रत्यक्ष राहत दिन यो योजना अगाडि बढाइएकोे केन्द्रका अध्यक्ष रामनाथ मालीले बताए ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान, ढुवानी अनुदानजस्ता अनुदानका र प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको अध्यक्ष मालीको भनाइ छ । बालीपात्रो अनुसार तरकारी लगाउने, बाली उत्पादनको अग्रिम सम्झौता गर्ने, माटो उपचार, बीउ, रोग किरा व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादनजस्ता कार्य समेत गर्ने छ । हरेक दिन बिहान ७–९ र बेलुका ३–५ बजेसम्म हाल तरकारी संकलन हुने कुरा अध्यक्ष रामनाथ मालीले जानकारी दिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले नमूना मोलडको योजना अगाडि सारेर किसानलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
प्रकाशित: २०७८ कार्तिक ५ गते १३:४४
सहमतिमै नाडाको नेतृत्व टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ : अध्यक्षका प्रत्यासी चौधरी (भिडिओ)
भन्सार छलेर सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल आउन थालेपछि राजस्व कार्यालयको सक्रियता बढ्दो
नेप्से ३७ अंकले घट्यो, ३ अर्ब १२ करोड कारोबार
हुन्डाईको ‘नयाँ कोना इलेक्ट्रिक’ नेपाली बजारमा
आर्थिक एजेण्डामा साझा धारणा बनाउन दलहरूलाई ढकालको आग्रह
नाडामा चुनावी सरगर्मी, अध्यक्षमा कसको पल्ला भारी ?
बुटवलमा २ अर्ब लगानीमा सिटी सेन्टर बन्दै
दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन स्थानीय तहलाई सरकारको परिपत्र
आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न तीन कार्यदल गठन
पत्रकार खासोगी हत्याको अभियोगमा एक साउदी नागरिक पक्राउ
पदाधिकारी छान्न देउवाले बोलाए आफू पक्षीय नेताहरूको बैठक
सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका उपाध्यक्षले कुर्सी हानेपछि अध्यक्षको दाँत भाँचियो
चुरे जोगाउन बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा
ओलीको प्रशंसा गर्दै शम्भु थापाले भने- कतिपय मुद्दामा फरक भयौं होला, तर तपाईंबाटै आशा छ (भिडिओ)
परमादेशको ‘पतलून उतार्दै’ न्यायाधीश र झगडीया- स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको धुलिसात्
भरत शाह हारेपछि बालकृष्ण खाणमाथि कार्यकर्ताको सन्देह
मतदान नगरेकोमा शेखरले मागे माफी
एमालेलाई नजिस्क्याउन चेतावनी दिँदै योगेशले भने- हाम्रा ब्याट्सम्यान मैदानमा आइसके, आउटपुट चुनावमा आउँछ
शेखर–सुजाताले भोट नहाल्दा गुरु घिमिरे पराजित, पुनः मतगणनाका लागि निवेदन
ओलीसँग बारको याचना- एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पास हुँदैन, सहयोग चाहियो
चार मन्त्रालय नपाए कर्णाली सरकारबाट माओवादी बाहिरिने